Ividiyo enemveliso ngeCantaloupe TV | Martech Zone
NgoLwesine, Septemba 27, 2007 NgoLwesine, Septemba 26, 2013 Douglas Karr
Namhlanje ndaziswa ICantaloupe TV ngomnye kaJo DiGregory, ngomnye wamaqabane asisiseko. Ibali elingemva kweCantaloupe lelinyanzelekileyo kwaye kufanelekile ukuba ujonge. Iqela laseCantaloupe linakho ukuthatha into abazama ukuyifezekisa, kodwa ndingayifanisa nevidiyo ephinda-phinda imeko yokubhloga.
ICantaloupe ayisiyo vidiyo eyakhelwe ujongano lomsebenzisi oluncomekayo okanye ukudibanisa ividiyo kunye neziphumo. Endaweni yoko, imodeli kaCantaloupe kukuqinisekisa ukuba umxholo kunye nencoko iphambili-ekwakheni ukuthembeka kunye 'nebali' lokudibanisa iividiyo kunye kunye nokubuyisa abantu. ICantaloupe inemodeli ye 'videosphere'.
IiSayithi zinokwakhiwa ngokudibanisa umxholo wevidiyo ('amajelo'), ngale ndlela iyodwa kodwa abaphulaphuli abafanayo abavela kwisiza ngasinye banokuvezelana. ICantaloupe ikhuthaza series yeevidiyo, hayi ividiyo enye. Kwakhona, injongo kukugcina abaphulaphuli kwincoko, ingabonisi nje imveliso ephezulu yobuchwephesha eyothusa ingqondo kunokuba iyenze.
Jonga ii Ukuqonda iTantaloupe TV iphepha kwindawo yabo. Njengoko babeka:
Amabali malunga nawe, ishishini lakho kunye nomzi mveliso wakho.
ICantaloupe isebenzisa amandla evidiyo ukubamba ukubandakanyeka, "njengoko kusenzeka" ngamabali ngawe ngelixa usebenzisa amandla e-intanethi ukubadlulisa…
Umxholo unokujoliswa kwaye ulinganiswe kubaphulaphuli. Ividiyo nganye 'yokufunda' inokubekwa esweni kwaye ilinganiswe ukubona ukuba abantu bayayibukela yonke loo nto okanye bakhuphe ibheyisi kwangoko. Yinto entle ngokwenene. Iqela likwazisa ezinye izixhobo zeNjini yokukhangela ukuqinisekisa ukuba ukusebenzisa itekhnoloji kuya kufumana ingqalelo elifaneleyo kwiinjini zokukhangela. Ukuba ungathanda, ungajonga ezinye zazo Iimagazini zeVidiyo njengokuba.
Itekhnoloji inexabiso eliphantsi kakhulu. Ndihlala ndimangalisiwe yindlela obiza ngayo ukufumana ezi nkonzo kwi-Intanethi, iCantaloupe inethuba lokutshintsha ishishini kwaye iqhube ezi ndleko emhlabeni - ngaphandle kokuncama nantoni na phakathi. Njengoko uJon ebeka, ayisiyiyo malunga nendlela epholile ngayo iqhosha leFlash kwindawo leyo, imalunga nomyalezo! ”.
Qiniseka ukuba ujonge i Uthotho lwenyani lweCantaloupe Yenza ngokwayo, inomdla ngokwenene.
Ndiza kufumana ukubonwa okungakumbi ICantaloupe TV Kungekudala, kuba kuzakubakho iNkomfa yeTekhnoloji ye-Indianapolis endizakuthetha ngayo ezakusebenzisa itekhnoloji (okuninzi okuza oku… ekuqaleni kukaDisemba). I-TV yaseCantaloupe ifana namashishini amaninzi endiwabona ehluma apha e-Indianapolis.
Umsonto oqhelekileyo ubonakala ngathi amashishini e-Indianapolis eTeknoloji amalunga nokusombulula ingxaki kwaye angazikhathazi nge-fluff. Siza kuyishiya loo nto kubazala bethu eSan Jose. Icandelo lezobuchwephesha liyakhula ngokwenene libe yindawo ekhulayo apha kwaye siqala ukuzilungiselela. Kumnandi ukuba yinxalenye yawo!
Ngokubhekisele kwigama, iCantaloupe, lelinye lala magama apholileyo asandula ukwenzeka… njengoko uJon wayegrumba kwi-cantaloupe, kunjalo.
tags: icantaloupebuyanba.tvUjon digregory
Yhu! Izimvo zibuyile.